Arbacada, February 4, 2015 Arbacada, February 4, 2015 Douglas Karr
In ka badan kala badh dadka suuqleyda ah oo dhan waxay aaminsan yihiin in xogta wasakhda ahi ay tahay caqabadda ugu weyn ee hortaagan dhisida barnaamijka suuqgeynta guuleysta. Adiga oo aan lahayn xog tayo leh ama xog aan dhammeystirnayn, waxaad lumineysaa awoodda aad si sax ah u bartilmaameedsan karto ulana xiriiri karto rajooyinkaaga. Taa baddalkeeda, tani waxay ka tagaysaa farqiga u dhexeeya awoodaada si aad u hubiso inaad buuxinayso baahiyaha kooxdaada iibinta sidoo kale. Waxtarka iibku waa qayb teknoolojiyad soo kordheysa. Awoodda, oo leh xog weyn, si loo bartilmaameedsado rajada, loogu beddelo hoggaanno,